थाहा खबर: दशैं सम्झाउने सदाबहार गीत
दशैं सम्झाउने सदाबहार गीत
काठमाडौं : नेपालमा सबैभन्दा धेरै मानिसले मनाउने चाड हो दशैं। यसको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व भिन्नै छँदै छ। दशैं नमनाउनेहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दशैंसँग जोडिएका हुन्छन्। जसरी तपाईं जोडिनुभएको छ।
हरेक वर्ष दशैं नजिकिनेबित्तिकै युट्युबमा रहेको यो गीतमा कमेन्ट बढ्न थाल्छ। यो वर्ष पनि धेरै ठाउँमा यो गीत बजिरहेको छ। ठिक यतिबेला पनि कतै न कतै बज्दै हुन सक्छ। एकैछिनमा त तपाईं बजाइ हाल्नुहुन्छ।
श्रीमान्‌ले आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गरेर एउटा नम्बर टिप्न भन्छन्। श्रीमतीले केको नम्बर हो भनेर सोध्छिन्। श्रीमान् भन्छन्‚ ‘थोरै पैसा पठाइदिएको छु, त्यसैको नम्बर हो।’ श्रीमती भन्छिन्‚ ‘किन दशैंमा घर आउने होइन र?’ श्रीमान् अलि अनकनाउँदै भन्छन्‚ ‘अँ..‚ छुट्टी नै पाइनँ, त्यही भएर त अलिकति पैसा पठाइदेको दशैं खर्च।’ श्रीमती झर्किन्छिन्‚ ‘पैसाले मात्रै हुन्छ र? ’ श्रीमान पनि झर्किन्छन्‚ ‘छुट्टी पाउनु परेन?’ श्रीमती रुन्छिन्‚ ‘चाहिँदैन पैसा सैसा।’ श्रीमान् चर्कै स्वरमा आफ्नो अवस्था बुझाउन खोज्छन्, ‘भनेजस्तो हुन्छ र विदेशमा? ’ तर, त्यति वेलासम्म श्रीमतीले फोन काटिसकेकी हुन्छिन्। श्रीमान् हेलो हेलो भन्छन्।
विदेशमा भएका श्रीमान्‌को चिठी आउँछ लेखिएको हुन्छ बाटो हेरे हुन्छ है घरमा यसपालिको दशैं र तिहारमा... अनि श्रीमतीले यतैबाट भन्छिन्‚ ‘मेरो हजुर आउनुहोस् घरगाउँको माया मुटुमा बोकेर।’
चरीररी ररी रै, चरीररी ररी रै चरीररी ररी ररी रै...‚ मुग्लान फिल्मको दशैं गीत नसुनी पनि दशैं आए जस्तो हुन्छ र? पन्ध्र वर्षभन्दा अगाडिको यो गीत हरेक वर्ष सुनिन्छ।
चियापानमा कलाकारदेखि खेलाडीसम्म आए, पूर्वराजासँग फोटो खिचाए (११ तस्वीर)
मर्नुअघि छाेरालाई मार्लीको सन्देश : पैसाले जीवन किन्न सकिँदैन